Dib u dhac ku yimid shir maanta la filayay inuu ka dhaco Muqdisho - Awdinle Online
Maalmihii la soo dhaafay waxaa Magalada Muqdisho kulamo kala duwna ku lahaa Madaxda Dowlad Goboleedyada, kulamadaas oo ay uga hadlayeen xalka gaarista khilafka doorashada iyo qabsoomida shirweynaha looga hadlayo arrimaha doorashooyinka.
Kulamadii ugu dambeeyay ee Madaxda dowlad Goboleedyda ayaa warraka laga helayo waxaa ay sheegayaan inay isku mari waayeen qodobo ay kamid yihiin Ajandaha shirka iyo Madaxweynayaasha Jubbaland & Puntland oo weli dalbanaya in Shirka ay ka qeyb galaan Midowga Musharixiinta & Guddoomiyaha Aqalka Sare.
Intii ay socdeen Maalmihii la soo dhaafay kulamada ayaa waxaa jiray is-afgarad ay gaareen Maamul Goboleedyada, hayeeshee ismrai-waagaan soo kala dhex-galay uu sabab ay in uu dib u dhaco Shirka Madaxda dowladda & Dowlad Goboleedyada oo lagu waday in uu Maanta ka furmo Teendhada Afisiyooni ee Magaalada Muqdisho.
Doorashada Soomaaliya ayaa waxaa weli ka taagan khilaf xoogan,waxaana Wakiilada Beesha Caalamka ay ku cadaadinayaan Hoggaamiyeyaasha Soomaalida inay heshiis gaaraan.
Previous articleWararkii ugu dambeeyay Shirka Madaxda Dowlad Goboleedyada
Next articleGalmudug oo xukun adag ku riday Kalluumeysato Ajnabi ah